Rexuiz, Trepidaton ary Smokin 'Guns: Lalao FPS 3 hafa ho an'ny GNU / Linux | Avy amin'ny Linux
Androany, hiresaka zavatra hafa manaitaitra isika Lalao FPS, izay ampianay amin'ny anay Lisitry ny lalao do Genre FPS (Shooter olona voalohany), ary an'iza ny anarany Rexuiz, Trepidaton ary Smokin 'Guns.
Araka ny resahina etsy ambany, lava sy mahaliana ny lisitra. Ho fanampin'izay, ny lalao rehetra angonina dia mety hahafaly ny maro. Izay no antony, araka ny efa nolazaintsika tamin'ny fotoana hafa, misy a misy tolotra tsara azo de Lalao FPS for Linux, tsy manisa ireo izay manana karazany hafa.
Anisan'izany ny anio 3, antsika daholo izany Lisitry ny lalao FPS maimaim-poana sy tera-tany ho an'ny Linux:
Faritry ny fahavalo - lova
Faritry ny fahavalo - ady amin'ny horohoron-tany
Basy Smokin '
Tsy vita fanamboarana
Wolfenstein - faritry ny fahavalo
Raha misy te hamaky bebe kokoa momba ny tsirairay Lalao FPS voalaza, azonao atao ny mijery ny lahatsoratray teo aloha izay voalaza etsy ambany, rehefa vita ity lahatsoratra ity:
1 Lalao FPS misimisy kokoa: Rexuiz, Trepidaton ary Smokin 'Guns
1.3 Basy Smokin '
Lalao FPS misimisy kokoa: Rexuiz, Trepidaton ary Smokin 'Guns
Avy amin'ity lalao open source FPS ity dia miavaka ity fampahalalana manaraka ity:
Lalao an-tserasera maimaim-poana (Free2Play) io, tsy misy raharaham-barotra anatiny sy sarany miafina.
Mandeha ilay kinova miorina ankehitriny, laharana 2.5.2-210206, navoaka andro vitsy lasa izay.
Amin'ny ankapobeny dia mpanjifa hafa an'ny Nexuiz Classic miaraka amin'ireo fanavaozana farany.
Mety hihazakazaka mora foana amin'ny solosaina loharano ambany izy io.
Manolotra traikefa ady fitifirana haingana sy mahafinaritra izy io.
Ahitana ny fomba fampielezan-kevitra avy amin'ny Horohoron-tany I.
Ankoatra ny azy tranokala ofisialy, izay misy antontan-taratasy tsara, pikantsary ary horonan-tsary momba azy, azonao atao ny mitsidika ireto rohy manaraka ireto Sourceforge y GitHub raha mila fanazavana fanampiny.
Lalao mifototra amin'ny motera IOQuake3 io.
Ny lalao dia ahitana zavatra maro: ambaratonga marobe 21 (sarintany), mifanentana amin'ny sarintany Quake 3 sy Star Trek Voyager Elite Force, feon-kira tany am-boalohany misy lohahevitra 10 tany am-boalohany, maodely lalao 7 ary fanohanan'ny Voice over IP ao amin'ny lalao (VoIP).
Ny fiandohany dia nanomboka tamin'ny 9 aprily 2006, nataon'ny mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonin'ny lalao Star Trek Elite Force, miaraka amin'ny fikasana hanangana lalao tifitifitra ho an'ny olona voalohany. Ary na dia tamin'ny fotoana tsy nahavitana ny tetikasa aza dia mbola eo an-dalam-pamolavolana ny tetikasa, miaraka amina kinova 0.0.27, tamin'ny 12-17-2019, azo alaina.
Ankoatra ny azy tranokala ofisialy, izay misy antontan-taratasy tsara, pikantsary ary horonan-tsary momba azy, azonao atao ny mitsidika ireto rohy manaraka ireto GitHub y Trepidation amin'ny planeta raha mila fanazavana fanampiny.
Lalao izay azo raisina ho toy ny fanovana tanteraka ny Quake III Arena avy amin'ny id Software.
Smokin 'Guns dia natao ho fanahafana semi-realistika ny atmosfera mahafinaritra an'ny' Old West 'ary novolavolaina tamin'ny motera Id Software's Quake III Arena.
Teraka tamin'ny anarana hoe Horohoron-tany Andrefana izy tamin'ny taona 2003. Ary ny ekipa iray fantatra amin'ny anarana hoe Iron Claw Interactive no namorona azy io. Tamin'ny 2005 ny lalao dia natolotra teo am-pelatanan'ny ekipa antsoina hoe "The Smokin 'Guns" izay tamin'ny 2008 dia nandefa kinova mahaleo tena, mitondra io anarana io ihany. 1.1, ny daty 2012, no misy ny kinova farany azo antoka.
Ny lalao dia ahitana fitaovam-piadiana vaovao tanteraka noforonina niaraka tamin'ny fampahalalana marina ara-tantara momba ny fahasimbana, ny tahan'ny afo, ny fotoana famerenana, ankoatry ny iray amin'ireo mety aminy. Ahitana karazana lalao sy sari-tany vaovao nentanin'ny filma koa. Ary ny mozika sy ny feon-kira nifanaraka tamin'ity vanim-potoana ity, mba hanampiana ny fahatsapana "seho basy."
Manolotra rafitra fahavoazana azo tanterahina misy toerana samihafa (loha, tratra, tendany, sns.) Ary fahasimbana mianjera miankina amin'ny haavony. Karazan-kilalao kilalao tandrefana vaovao hahazoana fahafinaretana bebe kokoa: fandrobana banky sy fomba duel. Rafitra iray vola mamela ny fividianana fitaovana amin'ny vola amin'ny valisoa sy fanangonana. Fandraisana mpampiasa grika mora ampiasaina sy HUD. Ary fanatsarana kely hafa hanatsarana ny lalao ary hampitombo ny fahafinaretana.
Su tranokala ofisialy manana antontan-taratasy taloha, pikantsary ary horonan-tsary momba azy, fa ny azy boky fampianarana y Wiki mety hahasoa tokoa izy ireo, raha sanatria misy te hanandrana.
Farany, ary ho fanampiny, manolo-kevitra izahay ny hamaky sy hanandrana mahaliana iray hafa Lalao FPS antsoina hoe «Freedoom» izay lalao atiny feno maimaim-poana mifototra amin'ny loza. Ho fanampin'izay, araka ny filazan'ny mpamolavola azy dia mifanaraka aminy fanovana lalao ("mods") natao ho an'ny lalao tany am-boalohany loza, nataon'ireo mpankafy sy mpanakanto an'i loza nandritra ny folo taona.
Manantena izahay fa izany "lahatsoratra kely ilaina" Amin'ireny Lalao FPS 3 nantsoina indrindra «Rexuiz, Trepidaton y Smokin' Guns», izay ampidirintsika ao amin'ny «Lisitry ny lalao FPS teratany maimaimpoana sy maimaim-poana ho an'ny Linux »; dia liana sy ilaina lehibe, ho an'ny rehetra «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» ary fandraisana anjara lehibe amin'ny fanaparitahana ny tontolo iainana mahatalanjona sy goavambe ary mitombo «GNU/Linux».
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Rexuiz, Trepidaton ary Smokin 'Guns: Lalao FPS 3 bebe kokoa ho an'ny GNU / Linux
Sailfish 4.0.1 tonga miaraka amin'ny fanavaozana ny interface, fanatsarana ary maro hafa
Canonical dia miasa amin'ny installer vaovao ho an'ny Ubuntu ary manao veloma an'i Martin Wimpress ihany koa